आज बिबाह को १२ वर्ष पुगेको दिन भावुक हुँदै सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले लेखे यस्ताे मन छुने स्टाटस! – Sandesh Press
आज बिबाह को १२ वर्ष पुगेको दिन भावुक हुँदै सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) ले लेखे यस्ताे मन छुने स्टाटस!
November 29, 2020 235
०६५ साल मंसिर १४ गते हिजो जस्तो लाग्छ ! त्यो दिन बाट सुरु भएको हाम्रो यात्रामा समय बितेको पतै भएन ! तिमी जीवन म यस्तो उपहार बनेर आएउ एक्लो जिबनले बेग्लै सार्थकता पायो ! तिमी सङग बिताएका प्रतेक पल हरुले मिठा अनि बेग्लै आनन्दका अनुभुति हरु गरिरहन्छ! तिमी साच्चिकै आड , भरोसा ,उर्जा अनि साहसको भण्डार हौ, म मात्रै होइन हाम्रो परिवारको अभिभावक हौ! तिम्रो शब्द कोश मा तोडने होइन जोडने अनि माया र
प्रेमले जगत हसाउने दरिलो इच्छासक्ती छ, त्यसैले तिमी महान छौ! तिम्रो सकारात्मक सोच अनि मन सग मैले मन साट्न पाएको छु! त्यही मन संग मन जोडदै बढेको हाम्रो यात्रा सबैको मन जोडदै अघि बढिरहेको छ नि! तिमीले कल्पना गरेका हरेक परियोजनाले तेहि भएर सार्थकता पाउदै अघि बढेका छन्नी ! आफू होइन जगत हसाउने तिम्रो यात्राको म सारथि बन्न पाएकोमा मैले निकै भाग्यमानी ठानेको छु वैवाहिक बर्सगाठको अवसरमा मन अनि मुटु भरी को शुभकामना कुन्जु!!
त्यो दिन बाट सुरु भएको हाम्रो यात्रामा समय बितेको पतै भएन ! तिमी जीवन म यस्तो उपहार बनेर आएउ एक्लो जिबनले बेग्लै सार्थकता पायो ! तिमी सङग बिताएका प्रतेक पल हरुले मिठा अनि बेग्लै आनन्दका अनुभुति हरु गरिरहन्छ! तिमी साच्चिकै आड , भरोसा ,उर्जा अनि साहसको भण्डार हौ, म मात्रै होइन हाम्रो परिवारको अभिभावक हौ! तिम्रो शब्द कोश मा तोडने होइन जोडने अनि माया र
Prevमैले पारसलाई विवाहको प्रस्ताव गर्दा उनले यो हुन सक्दैन भने, त्यसैले म देह त्याग गर्ने कोशिष पनि गरे : ५ दिनसम्म कोठामा थुनिएर बसें सोनिका (भिडियो हेर्नुस्)
Nextधन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस
सुनको सिक्री र लेडिज ब्याग लुटेर बाइकमा हुइकिने ३० वर्षीय युवा पक्राउ